Mogadishu Journal » Dhaawaca Henderson waxaa xaqiijiyay Southgate
Dhibaatooyinka dhaawaca Liverpool ayaa laga yaabaa inay sii kordhaan ka dib markii Jordan Henderson lagu qasbay inuu baxo intii lagu jiray guuldaradii England ee Belgium.
Jordan Henderson ayaa laga reebay England guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Belgium dhaawac dartiis - taasoo suuragal ka dhigeysa in Liverpool ay liidato xulashada.
Kabtanka Reds Henderson ayaa u banneeyay Harry Winks waqtigii nasashada ee Den Dreef, maadaama Saddexda Libaax loo diiday suurtagalnimada ku laabashada Finalka Nations League.
Isagoo hadlayay ciyaarta ka dib, tababaraha England Gareth Southgate ayaa xaqiijiyay in Henderson looga saaray muruqa awgiis, inkastoo uu diiday inuu xaqiijiyo in tani ay ku jirtay muruqa iyo inkale.
Jordan ayaa xoogaa ciriiri ah qeybtii hore ee ciyaarta wuxuuna dareemay inuusan sii wadi karin, ”ayuu yiri.
“Malaha caafimaad ahaan waa inaan ka tagaa [cudurka] hada laakiin laakiin, haa, waa inaan qiimeyno markaan soo laabano.”
Liverpool ayaa la ciyaareysa hogaamiyaasha Premier League ee Leicester City markii ay ku soo laabtaan garoomada muddo 7 maalmood gudahood ah, iyadoo dhaawacyo durba ku hanjabay inay saameyn weyn ku yeelan doonaan difaacashada horyaalka.
Jurgen Klopp ayaa laga yaabaa inuu ka maqnaado labadiisa dookha koowaad ee daafaca dhexe inta ka dhiman xilli ciyaareedka ka dib markii Joe Gomez lagu qasbay inuu maro qalliin jilibka ah usbuucii hore, isagoo ku biiray Virgil van Dijk oo muddo dheer maqnaa.
Taas ayaa la macno ah in Fabinho - laftiisu dhawaanahan dhaawac muruqa ah - ay u badan tahay inuu ciyaaro inta badan ololahan isagoo ah daafac dhexe oo macno leh, taasoo la micno ah in Klopp uu awood u yeelan karo inuu helo qadka dhexe ee khadka dhexe iyadoo Henderson uu garoomada ka maqnaan doono, gaar ahaan marka la eego saxiixa dhowaan Thiago Alcantara lama soo bandhigin tan iyo markii uu ku sugnaa dhamaadka helitaanka Richarlison ee duurjoogta duurjoogta ah intii lagu jiray kulankii Merseyside derby
Trent Alexander-Arnold ayaa wajahaya bil ka dib markii uu dhaawac kubka ah ka soo gaaray kulankii Manchester City ka hor fasaxa xulalka, halka Mohamed Salah laga helay tijaabada coronavirus intii uu ku maqnaa Masar. Xiddiga weerarka ka ciyaara wuxuu ahaa mid aan muuqan.
England ayaa martigelin doonta Iceland kulankooda ugu dambeeya ee Nations League Arbacada, kulan Raheem Sterling ayaa fariisan doona.
Weeraryahanka Manchester City ayaa seegay kulankii Belgium sababo la xiriira dhibaato kubka ah, diyaarna uma noqon doono isbuuca, inkastoo Southgate uu soo jeediyay Sterling inuu diyaar u yahay inuu ku laabto kooxda Pep Guardiola iyo Tottenham isbuuca soo socda.
“Raheem wuxuu seegay tababarkii jimcihii, dhibaato yar oo kubka ah,” ayuu sharaxay. “Wuxuu tababaray shalay, kuma uusan faraxsanayn sidaas darteedna diyaar uma noqon doono Arbacada, laakiin waxaan qiyaasayaa inuu diyaar noqon doono dhamaadka usbuuca.”